otu lever ụlọ ịsa ahụ foset leghaara nickel
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / WOWOW Bathroom Vessel Faucets Brusel Nickel
gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 18 ahịa Fim
Nchịkọta pọpụpọ na-ewetara gị usoro ndọghachi azụ na-enweghị oge maka ụzọ ọhụụ maka mpaghara ọrụ dị iche iche nke ụlọ ịsa ahụ. Chekwaa mmiri ịsa ahụ n’elu ụlọ n’ọtụtụ ebe dị iche iche.
Ntụziaka nwụnye 2321501
Uclọ ịsa ahụ batrị faịlị otu 2321501
Nke a na-asa ahụ foset otu ahụ na-enye nkecha kwalite gị ime ụlọ ịwụ. Ejiri nlezianya dozie ya na flair, ma jiri aghụghọ aghụghọ. Emere ụlọ ịsa ahụ pụrụ iche nke otu WOWOW nwere akụkụ atọ, yana yana kpochapụ nickel kpochapụrụ. Ọ bụghị n'efu ka ụlọ ịsa ahụ a na-arụ otu ebe bụ eyecatcher n'ime ime ụlọ ịwụ ọ bụla, ọ ga-abụrịrị otu n'ime isi ihe ịchọ mma ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ gị.
Nnyocha e mere egosiwo na ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ bụ isi ihe dị na ime ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Nke ahụ pụtara na uche onye ọ bụla na-akpaghị aka na-etinye mmiri ịsa ahụ. O yikarịrị ka ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ bụ otu n'ime obere ihe dị na ime ụlọ ịsa ahụ gị. Ma ha nwere mmetụta dị ukwuu na nghọta nke ịdị ebube ya. Maa, ị nwere ike itinye mmetụ nke ịdị mma na ime ụlọ ịsa ahụ ọ bụla nwere ebe a na-asa ahụ na WOWOW. Ndị na-emepụta WOWOW ghọtara n'ụzọ doro anya mmetụta nke ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ, wee sikwa na-emepụta pọmpụ ụlọ ịsa ahụ nwere ike ime mgbanwe na ịchọ mma ọ bụla.
Imewe ụlọ ịsa ahụ ụlọ ịsa ahụ
Chọrọ ka ụlọ ịsa ahụ mara mma nke ukwuu ma na-arụkwa ọrụ n'otu oge. N'ihi ya, ị ga-ekpebi ụdị akwa mmiri ịsa ahụ ị ga-ahọrọ. Ebe enwere mmiri dị iche iche dị na mmiri ịsa ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ lelee ohere ị nwere, yana ihe masịrị gị maka njikwa mmiri ọkụ. Ọ masịrị gị iji aka aka gị wee jikwaa ọ̀kwa mmiri na ogo ya Mgbe ịchọrọ karịa otu aka, mgbe ahụ faucet otu aka nke WOWOW nwere ike ịbụ na imipu ụlọ ịsa ahụ mara mma ị na-achọ!
Ejiri ụdị ọmarịcha ụlọ ịwụ ahụ wee rụọ ya nke ọma. Otu adọgharị ahụ na-adị mma n'akụkụ akụkụ nke ụlọ ịsa ahụ. Aka otu eriri mmiri nke WOWOW na-arụ ọrụ nke ọma. Enwere ike ijikwa olu nke mmiri na ọnọdụ okpomọkụ n'otu aka. Otu aka bụ enweghị ihe ịrụ ụka adịghị mfe ijide ma rụọ ọrụ. Nwere ike iji naanị otu aka were dozie nsị nke ime ụlọ ịwụ ahụ site na ịwepụ ya. N'ụzọ dị otu a a na-arụ ọrụ ọrịrị mmiri na-agbanwe agbanwe. Site n'ịgbagharị otu aka ị ga - eme ka okpomoku nke mmiri dịkwuo nfe ma dịkwa nwayọ. Ihe eji eme ka ndi US jiri uzo onu ato kpuchie uzo puru iche. Nke a na - eme ụlọ ịsa ahụ gị dịkwuo elu, ma na - erite uru na arụmọrụ niile ọ na - enye gị.
Akwa mma ụlọ ịsa ahụ na-arụ ọrụ dị mma
WOWOW's bath foset single handle bụ nke e ji ọla kọpa mee wee jiri ọla kọpa mee nchacha mma ya. Maka mmecha ya, WOWOW na - eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ na - enye ogo kachasi na ike. Ebe ọ bụ na otu ihe eji eme ụlọ ịsa ahụ nke WOWOW bụ nke ọla kọpa siri ike, ụlọ mposi a na-emepe emepe na-enyekwa ezigbo nguzogide mmiri ma yabụ corrosion. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla, WOWOW na-enye oge ikike nke afọ 3 maka ime ụlọ ịsa ahụ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye. Ihe akaebe na WOWOW kwenyere na ogo nke ngwaahịa ya ma were ọrụ maka arụmọrụ afọ ya.
Dị ka imewe nke ime ụlọ ịwụ ahụ bụ otu aka pụrụ iche na patted, ụfọdụ ọrụ ya bụ ihe pụrụ iche. Igwe eji echekwa mmiri n’etinye ihe nlere maka ima atu. Ọrụ dị elu Neoperl Onye na-akwalite ụlọ ịsa ahụ na-arụ ọrụ otu nwere njiri mara mma ma na-ejikwa njikwa mmiri. Yabụ ị gaghị enweta mmiri ịsa mmiri. Ewepu ya zoputa ihe ruru pacenti iri ato. Ga-ahụ nke a na ụgwọ mmiri gị. Enwere ike iwepụ onye nrụpụta ngwa ngwa site na iji ngwa ọrụ nchịkọta (gụnyere). N'ụzọ dị otu a, ị nwere ike ịsacha ya ngwa ngwa ugbu a, iji mee nkwa nke ọma kachasị arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ.
Uclọ mmiri ịsa ahụ na-adị mfe idozi
Nke mbụ, nchara nchara na-eme ka ụlọ ịsa ahụ ọ bụla nwee mmetụ mara mma. Ọzọkwa, imecha dị mma na-egbochi mmiri, mmiri na akara aka. Yabụ, ọ dị mfe ilekọta na ịdị ọcha. Nwere ike jiri nwayọ were ihe ruru unyi kpochapu ihe niile iji mee ka ime ụlọ ịwụ ahụ na-acha ọcha dị ka nke ọhụrụ. Ihichapu mmiri nke ime ụlọ ịsa ahụ gị mgbe niile, na -eme gị ogologo ntachi obi. N'ụzọ dị otu a, nsị siri ike enweghị mgbanwe ịrapara na mmiri ịsa ahụ gị. Karịsịa, nsị dị ka nzu nwere ike imetụta ime ụlọ ịsa ahụ gị, ma ọ bụrụ na asachaghị ya mgbe niile. WOWOW na-eme ka ọ dị mfe, ka ị wee nwee ike ịme nke a n'enweghị mbọ ọ bụla.
The seramiiki valvụ nke ụlọ ịwụ ahụ foset otu ahụ na-enye gị a 100% drip-free arụmọrụ. Ma na-enweghị mbenata ya ire ụtọ iji rụọ ọrụ. Nke a dị elu seramiiki katrij a nwalere na ihe karịrị 500,000 mmiri cycles. Ma ka WOWOW's bathroom foset single handle na-arụ ọrụ n'otu udo. Ma n'ezie ka na-adapu-ego na-ehi ehi-free. Were ya na enwere ike iji pọmpụ ụlọ ịsa ahụ mee ihe karịa 10,000 ugboro kwa afọ. Nke ahụ pụtara na iji pọmpụ ịsa ahụ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye nke WOW ị zụrụ ọkpọka ime ụlọ ịwụ maka ndụ. Otu ụlọ ịsa ahụ a na-edozi edozi ya karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ niile!
Jiri aka gị saa ụlọ ịsa ahụ
Otu ụlọ ịsa ahụ na-asa ahụ bụ nke dị mfe ịwụnye onwe gị. Pl gaghị achọ plọp ọ bụla dị ọnụ ahịa! Yabụ ị nwekwara ike ịchekwa ụgwọ nrụnye nrụnye nke ukwuu. A na-enye akwa mmiri ime ụlọ ị ga-eji aka gị rụọ ya yana ngwa ọrụ ọfụma. Nke a na-etinye efere oche, oghere mmiri Tucai nke 20 inch nwere njiri echere, aka ntinye aka, onye na-ewepu ngwa ọrụ na ihe ndị ọzọ.
Dịka e kwuru n’elu, WOWOW kwenyesiri ike na ịdị ọcha nke ụlọ ịsa ahụ. Ya mere, WOWOW na-enye gị oge ikike afọ 3 maka akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na akwa mmiri ịsa ahụ gị agaghị arụ ọrụ dịka ọ ga-arụ, a ga-enye gị ọfụma ụlọ ịsa ahụ ọhụụ iji dochie nke gị. Na mgbakwunye, WOWOW na-enye nkwa mmachi ụbọchị 90. Y’oburu n’inweghi obi uto n’ebe ego WOWOW n’enye gi, igha eme
nweta nkwụghachi zuru oke n ’akwụghị ụgwọ ọ bụla, yana n’ajughi ajụjụ. Dị Mfe dị ka nke ahụ!
Design Ihe eji eji uzo ato eme US
Nick Ezigbo mmachi wuruwuru
Of Ihe eji eme ihe di elu
Handle Otu aka ga-adịrị gị mma
Na - azoputa mmiri ruru pacenti iri ise
Warranty afọ ikike
SKU: 2321501 Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ Tags: 1 Aka, 1 ikp, ime ụlọ ịwụ ahụ
16.2 x 9.1 x 6 sentimita
9.5 sentimita asatọ
18 reviews maka WOWOW Bathroom Vessel na-agbachasị aja aja dị ọcha
Mara ezigbo mma foset, Superve Quality na esy nwụnye
Ngwaahịa a nwere anya pụrụ iche na mgbakwunye ịbụ otu aka, ọ bụ ya mere m ji zụta. M nnọọ afọ ojuju na àgwà na imecha nke ngwaahịa na m obi ụtọ na m zụọ.
Azụrụ m nke a iji dochie eriri 2, nke nwere oghere 3 n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ m. Ọ bụ ezie na oghere dị n’etiti ihe efu ahụ pere mpe nke na ọ dị mkpa ka a gwuo ya iji nweta ọkpọkọ ọhụrụ a, efere ihu nke gụnyere eriri a kpuchiri oghere 3 ahụ.
Igwe mmiri a na-eji mma, igwe anaghị agba nchara na akwa ọla. Etiti dabara adaba nwere mgbanaka ọla iji chekwaa pọmpụ ahụ na ihe efu na 2 kposara n'akụkụ abụọ nke mgbanaka ahụ iji hụ na nrụgide dị. Nke a dị ka ọmarịcha fosetị wụnye ụbọchị ndị a, nke m nwere ekele maka etu o siri sie ike ị nweta torque kwesịrị ekwesị na oghere siri ike na-enweghị 2 skru.
Mgbapu mmiri anaghị adaba kpamkpam n'ime mmiri m, mana ọ masịrị m na ọ bụ ihe nkwụsị-imechi karịa ịnwe ogwe ịdọpụ. Ihe dị iche nke igbapu oji na ocha ocha di nma. Fọdụ ndị nwere ike iche na nsị ahụ bụ plastik, yabụ na ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama. M ga-ahụ otú o si guzo n'elu oge.
Okwesiri ighota na emeela m udiri mmiri a n’oge gara aga. Adị m aka gị DIY'er, mana abụghị m ọkaibe. Ngwá ọrụ na ihe ndị m ji mee ihe gụnyere mgbachi, mkpọchi ọwa, screwdriver, bọket, towel, plumbers putty, teflon teepu, isiike EZ Change foset tool (na 1 1/2 ″ oghere hụrụ + malite ịgba iji gbanwee ihe efu).
Ihe ọkụkụ a masịrị m nke ukwuu. E wuru ya nke ọma, ọ dị arọ, ọ mara ezigbo mma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Echichi bụ ikuku, ma usoro a na-enye dị mkpụmkpụ. Enweghị nchekasị. Onye nrụpụta ahụ nyere Teflon teepu. Naanị ihe m ga-achọ ka nke a nwee bụ ụdị plastik dị n'okpuru efere arịgo ahụ ka enwere ike ịgbatịkwu ya. Ekwenyesiri m ike na m nwere ike ịmepụta ihe. Na mkpokọta, nke a bụ otu okirikiri nke ọkpọkọ ọkpọkọ.
Dị ka ndị ọzọ kwupụtara, imesi ọkpọ ahụ ike nwere ọchịchọ ịkpọlata efere oche. Ihe ngwọta m nye nke a bụ iji o-yiri mgbaaka gburugburu eriri eri ahụ nke hoses na-agafe. O-yiri mgbaaka ga-ebu oke iji banye gburugburu aka uwe ahụ ma pere mpe iji banye site na efere oche. Akpọkọtara m ole na ole n’ime ha nke mere na ogo ogologo ahụ dị ogologo karịa ogologo efere oche ahụ. O-yiri mgbaaka nwere mgbakwunye ọzọ na ọ na-enyere etiti etiti pọmpụ na oche dị elu. Site na usoro a, enwere m ike ịkwado eriri mmiri ahụ ka ọ ghara imegharị na efere ahụ adịghị ehulata.
Enwere m ezigbo ịhụnanya na ọkpọkọ mmiri a. Ọ bụ amara edoghi na mfe bụ ikpọ. Emere ya nke ọma, ọ bụghị ọnụ ala n’ụzọ ọ bụla. All akụkụ na-adị mfe amata na ọ bụ nnọọ mfe iji wụnye. Adịghị m ọkwọ osisi ma nwee ntakịrị ahụmịhe, dị m ka ịnwale ihe ọhụrụ na enwere m ike itinye nke a ma nwee ya na-arụ ọrụ n'ime otu elekere.
Ọsọ a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laminar ma ọ nwere ike wepụta ụda mmiri ma ọ bụrụ na ị hapụ ya.
Obi dị m ezigbo ụtọ ịnwe nke a na ịsa ahụ ọbịa anyị ma nata otuto!
Ọ bụ ihe a na-enweghị atụ. Eji m ụfọdụ pọmpụ ndị na-atụba ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro 2 tụnyere ma ha anaghị atụnyere. Ihe a bụ ihe siri ike nke ọla! Mmetụta dị mma. Adị m onye na-eto eto na-eto eto. M na-ekwesịghị kwes happyr this-enweta a obi ụtọ banyere a ụlọ ịwụ eletrik ma m hụrụ ya n'anya!
Etinyere m nke a na ime ụlọ ịwụ 60s ochie nke ka nwere ihe ndozi mbụ. Ekwesịrị m ịgbasa oghere etiti site na ịmịcha ya. Ekwesiri m ime otu ihe ahụ maka igbapu mmiri. Ejighị m drain nke na-eso ya, azụrụ m ọrụ gbapụta siri ike. Nke a agbanweela ụlọ ịsa ahụ m ma nye ya mmetụ dị elu, ọbụlagodi na ọ bụ naanị ịkwọ aka m, nke anyị niile na-eme ọtụtụ n'oge na-adịbeghị anya.
Wowow foset dị oke mma ma imewe mara mma maka ọnụahịa ahụ. Nickel gwụchara nwere satin mara mma ma dịkwa mfe nhicha ma nwee ntụpọ. Njikwa aka dị mfe dị mfe ma kensinammuo iji. Ọ na-abịa na efere mkpuchi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji gbanwee site na oghere atọ gaa na otu, mana m na-etinye ya ozugbo na-enweghị efere na otu oghere m otu. Ọ dị mfe ịwụnye, mana mara na eriri ndepụta ahụ bụ naanị ihe dị ka otu ụkwụ n'ogologo ma ị nwere ike ịchọ mgbakwunye mgbakwunye mmiri ọzọ iji ruo valvụ ntinye gị. Nke a bụ ngwaahịa mara mma yana ọnụ ahịa dị ukwuu maka ọnụahịa ahụ.
Kpamkpam nnọọ! Onye ọrụ mmiri anyị jụrụ ebe anyị si nweta pọmpụ ahụ n'ihi na ọ dị mma nke ukwuu ma ọchọrọ iji nweta nke ya n'onwe ya. Aga m akwado. Iji kpochapu ya, ọ mara ezigbo mma.
Enwere m afọ ojuju nke mgbata! Nhazi ahụ dị mfe ma dị mma, nke na-eme ụlọ ịsa ahụ m mma! Nnukwu uru bụ na echichi dị mfe! N'ikwu eziokwu, echere m na ọ ga-ewe oge iji wụnye ya, mana ntuziaka ndị ahụ doro anya ma dịkwa mfe nghọta. Anọ m na-eto maka ọdịdị nke pọmpụ a. M na-enwe ọkpọka ọkpọkọ mmiri nke America na ụlọ ịsa ahụ n'elu ụlọ, mana ọ dịchaghị mma. Enwere m mmasị n'ọdịdị nke pọmpụ mmiri a, ọ na-amasịkwa m ọgwụgwọ elu!
10 si 10! Zụrụ Atọ ma hụ ha n'anya! Dị ezigbo mma na ọnụahịa bụ ohi.
Pulu mmiri ahụ dị obere ma ọ bụ dị arọ karịa ka m gaara achọ!
M hụrụ n'anya ịke na otú foset na-arụ ọrụ, ezi ihe. Ọ dị oke mma
Akpa ụlọ ịsa ahụ mbụ m zụtara! Ọ dị ịtụnanya! Emere nke ọma ma sie ike! Sleek na ihe nkwụsị na sink dị ukwuu. M zuru ịhụnanya!
Enwere m ebe nyocha nke mwube iji nyochaa pọmpụ mmiri.
M ga-anwa imebi ihe kachasị mma dịka m nwere ike n'ihe gbasara ogo ngwaahịa na mgbagwoju anya nke nrụnye.
Na ọnụọgụ 1-10, m ga - asị na ọkpọkọ a bụ 7/10 ruo na nsogbu nwụnye.
Buru n’uche na ọ nwere ike ịdị iche n’otú e si arụ ụlọ ịsa ahụ na ebe a na-edebe ụlọ gị.
Otu ọkpọkọ ọkpọ a dị mma.
Oji ojii mechara dị mma. N'ozuzu, ọkpọkọ mmiri a na-adịgide adịgide. Ọ masịrị m na ngwụcha ahụ adịghị enwe ntụpọ n'ihi matte anya. Ọ dịghị mkpa ka ehichapụ ya dị ka oge dị ka chrome iji nọgide na-enwu gbaa.
Single njikwa na-eme ka ọ dị mfe iji họrọ mmiri okpomọkụ. Ngwakọta ngwakọta na-arụ ọrụ dị ukwuu, dịka o kwesịrị.
Nke a foset dị mfe iji rụọ ọrụ na-akpali nnọọ were were na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Eziokwu ahụ na ọ bụ ngbanwe ogo ogo 360 bụ dakọtara ebe ọ bụ na ị nwere ike ịrịgo ya n'agbanyeghị na ịchọrọ ma ọ ka ga-akwaga ebe ịchọrọ ya. Ọzọkwa abịa na oche efere. Nwere ike ikpuchi oghere ndị ahụ a na-ejighi eji ya eme ihe.
I nwere ikike kwatuo isi, nke bụ maa a gbakwunyere dị ka nke ọma. Multiple ịgba ụdịdị na-adịghị amasị ụfọdụ ndị ọzọ na-adọta ala fosets. A na-eme ntọala nke isi isi na-apụta nke ọma ka ọ ghara ịkụda eriri ahụ ka oge na-aga.
Mara mma imewe yana kwesịrị ekwesị na imecha-eme ka onye a ma ọ bụrụ na nke kacha mma fosets mgbe. O siri ike ịkọwa site na eserese mana ọkpọkọ ahụ nwere ihe pụrụ iche nke na-etinye obere mgbagha na nsị ahụ, na-eme ka ọ bụrụ ihe osise. Ọ bụ iwu siri ike siri ike. Ihe nkwụsịtụ aka dị ịtụnanya dị ịtụnanya. Nnennen n'ihu Easy wụnye ọbụna na-abịa na uwe. Enweghị m ike ịnyeghachi ya!
Ntinye dị mfe na ngwa niile ma nye ya, ihe ndị ahụ gosipụtara nke ọma wuru ma dị mma. Ihe a na-enye na njikọta nke m wetara dochie eriri ochie m. Mmiri na-aga nke ọma na nzaghachi nke ọma na otu njikwa na obere mkpọtụ na enweghị mmetụ dị ka ọkpọ mmiri ochie m. Nhazi ahụ mara mma ma mee ụlọ ịsa ahụ ochie m ka ọ dị ọhụrụ ma dị ọhụrụ. Naanị adịghị ike na-abịa na a mmapụta igbapu eletrik na m nwere ka a iji aka m ochie m eletrik. Na mkpokọta, ọmarịcha mma na ịma mma ile anya ma kwesịrị ịdịru ọtụtụ afọ, aga m emelite ọzọ n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla bilitere.
Nke a bụ ihe ndị kasị ọmarịcha ụlọ ịwụ ahụ foset m hụrụ. Ọ nwere ọtụtụ ụdị ma ọ dị arọ. Emeela nke ọma ma rụọkwa ọrụ nke ukwuu. Ọ dị mfe ịwụnye. Ga-akwado nke a nye onye ọ bụla chọrọ ọkpọkọ siri ike, nke ọgbara ọhụrụ.
Azụrụ m nke a iji kwalite pọmpụ ụlọ ịsa ahụ m na-eme n’oge. Enwere m nchegbu banyere nsogbu ihe isi ike na ịwụnye ọkpọkọ ọhụrụ. Agbanyeghị, ngwugwu ahụ ji akwụkwọ ntuziaka banyere otu esi etinye ya. Akụkụ siri ike na-agbanweghachi ya na ọkpọ mmiri m dị na ime ụlọ ịsa ahụ m. Mana ọ jọghị njọ ịchọpụta. Ọ bụ ezie na oge nwụnye dịka ihe karịrị 1hr maka m ka m na-arụtụbeghị ọrụ ọ bụla. Obi dị m ezigbo ụtọ na ọ bịara n'efere ya maka isi ya dị ka ọkpọkọ mmiri dị ugbu a nwere oghere 3 gbapuru na granite m ka m wee nwee ike iji efere iji kpuchie 2 nke oghere nke ọkpọ a achọghị. Enwekwara aka nke abuo ga enyere aka nke oma obu ezie na m rụnyere ya nani mana nke mere ka ogo siri ike.
Ihe m ji mee ihe bụ 11mm wrentch iji mwekota sooks nke pọmpụ ahụ n'ụlọ m (ọkpọ ọkụ na oyi), onye ọkwọ ụgbọ ala ịkwanye eriri mmiri na granite n'okpuru na ihe nkedo iji gbanwee okpu mmiri
Ihe ngwugwu a jiri aka aka mee iji gbochie mgbochi mkpịsị aka ya niile mana ejighị m ya.
Ruo ugbu a, m na-eji ya ma onye ọ bụla nọ n'ụlọ ahụ nwere mmasị n'ụzọ ọhụrụ ọkpọ mmiri ahụ dị. M ga-hoo haa na-azụ ihe faucets site na nke a ụlọ ahịa dị ka m na-ele anya iji nweta nkwalite ndị ọzọ faucets gburugburu ụlọ.
Na-ele anya nke ọma. Obere nnukwu maka obere ime ụlọ ịwụ. Mita nke uto.
Ọmarịcha nwelite maka ụlọ ịsa ahụ m. Ezigbo mma.